ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဧပြီ ၁၊ ၂၀၀၇
ဖတ်လို ကာဇက် ကိုရီးယား ချက် ချီချေဝါ ဂါ ဂျာမန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် ဆက်ဆွာနာ ဆီလိုဇီ ဆွာဟီလီ တဆောန်ဂါ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တာ့ခ်မန် တာ့ခ်မန် (ဆီရီးလစ်ခ်) တူရကီ ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ဘိုင်ကိုးလ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရှိုနာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အီတလီ အေးဝေး
ခရစ်ယာန်အသင်းတော်မှ အကူအညီရထိုက်သူဖြစ်နိုင်ရန် မုဆိုးမတစ်ဦးသည် “လင်တစ်ယောက်တည်းရှိဖူးသောသူ” ဖြစ်ရမည်ဟူသော ပေါလု၏စကားများကို ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့နားလည်ရမည်နည်း။—⁠၁ တိမောသေ ၅:⁠၉။
မုဆိုးမတစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်၍ တမန်တော်ပေါလုပြောနေခြင်းဖြစ်သောကြောင့် “လင်တစ်ယောက်တည်းရှိဖူးသောသူ” ဟူသောဖော်ပြချက်သည် မုဆိုးမ,မဖြစ်မီက သူ၏အခြေအနေကို ထင်ရှားစွာရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်ရမည်။ ယင်းက မုဆိုးမသည် တစ်ကြိမ်သာအိမ်ထောင်ပြုဖူးသူဖြစ်ရမည်ကို ဆိုလိုနိုင်ပါသလော။ သို့မဟုတ် ပေါလု၏စကားများသည် အခြားအရာတစ်ခုခုကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသလော။ *
အချို့က တစ်ကြိမ်သာ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ဖူးသူမုဆိုးမများကို ပေါလု ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အဖွဲ့အစည်းအများစုတွင် ပြန်ပြီးလက်မထပ်သော မုဆိုးမတစ်ဦးအား အထူးသဖြင့် ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်သူအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်မှာ မှန်ပါသည်။ သို့သော် ထိုရှုမြင်ချက်သည် ပေါလု၏အခြားစာစောင်များရှိ စကားများနှင့်မကိုက်ညီချေ။ ဥပမာ၊ ပြန်ပြီးလက်မထပ်သောမုဆိုးမတစ်ဦးသည် ပိုပျော်ရွှင်မည်ဟု ပေါလု သဘောထားရှိသော်လည်း ကောရိန္သုခရစ်ယာန်များထံရေးသောစာတွင် “သူမသည်သခင်ဘုရား၌သာ သူမနှစ်သက်သူကို လက်ထပ်ရန်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်” ဟု သူရှင်းလင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ (၁ ကောရိန္သု ၇:၃၉၊ ၄၀၊ ကဘ; ရောမ ၇:၂၊ ၃) ထပ်ဆင့်၍ တိမောသေထံရေးသောစာတွင်လည်း ပေါလုဤသို့ပြော၏– “အသက်အရွယ်ငယ်သေးသည့် မုဆိုးမတို့သည် အိမ်ထောင်သားမွေးမှုကိုပြု . . . ကြသည်ကို ငါလိုလား၏။” (၁ တိမောသေ ၅:၁၄၊ ခမ) ထို့ကြောင့် မုဆိုးမတစ်ဦးသည် ပြန်ပြီးလက်ထပ်ရန်ရွေးချယ်ပါက သူ့ကို အပြစ်တင်စရာမလိုပါ။
သို့ဖြစ်လျှင် တိမောသေကိုပြောသော ပေါလု၏စကားများကို မည်သို့သဘောပေါက်သင့်သနည်း။ “လင်တစ်ယောက်တည်းရှိဖူးသောသူ” ဟူသောဖော်ပြချက်သည် ဤအခန်းငယ်တစ်ခုတည်း၌ တွေ့ရသည်။ မူရင်းဘာသာစကား၌ ယင်း၏စာသားအတိုင်းအဓိပ္ပာယ်မှာ “ယောက်ျားတစ်ယောက်တည်းရှိသောမိန်းမ” ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကား ယင်းဖော်ပြချက်သည် ပေါလု၏စာများတွင် သူအကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြခဲ့သော “မယားတစ်ယောက်တည်းရှိသောသူ” သို့မဟုတ် မူရင်းဘာသာစကားတွင် “မိန်းမတစ်ယောက်တည်းရှိသောယောက်ျား” နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ (၁ တိမောသေ ၃:၂၊ ၁၂; တိတု ၁:⁠၆) ခရစ်ယာန်ကြီးကြပ်မှူးများနှင့် ဓမ္မအမှုထမ်းများအတွက် တောင်းဆိုသောအရည်အချင်းများကို ဖော်ပြသောအခါ “မယားတစ်ယောက်တည်းရှိသောသူ” ဟုပေါလုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယင်း၏ရှေ့နောက်စကားစဉ်တွင် အဓိကဆိုလိုသည်မှာ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် အရည်အချင်းရှိရန် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် အိမ်ထောင်ရှိသူဖြစ်လျှင် မိမိဇနီးအပေါ်သစ္စာရှိသူဖြစ်ရမည်၊ ကျင့်ဝတ်တရားဘက်တွင် အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သူဖြစ်ရမည်။ * ထို့အတွက်ကြောင့် ၁ တိမောသေ ၅:၉ ပါဖော်ပြချက်သည် ထပ်တူအချက်ကိုပင် အာရုံစိုက်စေပုံပေါက်သည်– မုဆိုးမတစ်ဦး အသင်းတော်မှအကူအညီရထိုက်သူဖြစ်နိုင်ရန် သူသည် မိမိခင်ပွန်းအသက်ရှင်စဉ် ခင်ပွန်းကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးကာ သစ္စာရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မည်သည့်အကျင့်ပျက်ပြားခြင်းနှင့်မဆို ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ ပေါလု ဖော်ပြထားသောထပ်ဆင့်လိုအပ်ချက်အားလုံးသည် ယင်းသို့သောသူမျိုးကိုသာ ရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။—⁠၁ တိမောသေ ၅:⁠၁၀။
^ အပိုဒ်၊3တမန်တော်ခေတ်၌ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ခင်ပွန်းအများယူခြင်းဖြစ်သော လင်ပြိုင်ဓလေ့ကို ဂရိ-ရောမလောကတွင် လက်မခံခဲ့ချေ။ ထို့ကြောင့် ပေါလုသည် တိမောသေထံသို့ ယင်းအကြောင်း သို့မဟုတ် ယင်းသို့ပြုကျင့်နေသူအား အပြစ်တင်ရေးသားနေခြင်းဖြစ်နိုင်ပုံမရချေ။
^ အပိုဒ်၊5ဤအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးထားချက်ကို ကင်းမျှော်စင် ၁၉၉၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ စာမျက်နှာ ၁၇ နှင့် ၁၉၈၀၊ စက်တင်ဘာ ၁၅၊ စာမျက်နှာ ၃၁ [လိပ်] မှ “စာရှုသူများထံမှမေးခွန်းလွှာ” ကိုရှု။
က၀၇ ၄/၁ စာ. ၃၁
တပည့်ဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းက ကျွန်မဘဝကို ပုံသွင်းခဲ့တယ်
ခရစ်တော်နှင့် ကိုယ်တော်၏တည်ကြည်သောကျွန်အပေါ် မသွေမဖည် စွဲမြဲတည်ကြည်လော့
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဧပြီ ၁၊ ၂၀၀၇
ဧပြီ ၁၊ ၂၀၀၇
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဧပြီ ၁၊ ၂၀၀၇